UJoe Louis vs Tony Galento | Ibhombu eBrown | Iitoni ezimbini uTony Galento
IBomber eBrown kunye neToni ezimbini uTony Galento
UJoe Louis vs Tony Galento 28/6/39
UJoe Louis vs Tony Galento wabanjwa nge-28 kaJuni, 1939, ye ubuntshatsheli obunzima zehlabathi. Ngeli xesha, uLouis wayethandwa kakhulu (i-8 ukuya kwi-1) yokumisa uGalento.
UGalento khange athandwe ngumdlalo wamanqindi. Kudliwanondlebe olungaphambi kokulwa, uGalento ushwankathele umbono wakhe kumlo ngolu hlobo lulandelayo:
Intatheli: “Tony, ucinga ukuba anganjani amathuba akho ngokuchasene noJoe Louis?”
UGalento: “Joe ngubani?”
Intatheli: “UJoe Louis.”
UGalento: “Andizange ndizidube nge-da bum.
Malunga noTony "iToni ezimbini" Galento
(UJoe Louis vs Tony Galento)
UDomenico Antonio Galento wayeyimbethi manqindi yaseMelika enzima. Ebizwa ngegama "ezimbini iitoni" ngenxa yokuqiqa kwakhe kumphathi wakhe malunga nokuphantse afike emva kwenye yomlo wakhe: "bendineetoni ezimbini zomkhenkce ukuzisa apha". UGalento wayengomnye wamagorha anemibala kwimbali yezemidlalo. Walwa i-octopus, kwaye wafaka ibhokisi kwi-kangaroo njengolwazelelelo kwimilo yakhe. Uye wafaka ibhokisi eyi-550 lb. njengomtsalane kwinqanaba.
UGalento "wayengumntu othanda ukubambana", ekhohlo okhohlakeleyo ikhonkco, ongazange avumele ubuncwane obunje ngemithetho yeringi, okanye umdlalo wezemidlalo, uphazamise injongo yakhe yokubetha omnye umlo. Ngexesha lakhe lokuqala njengembethi manqindi, uGalento wayengumnini kwaye eqhuba ibar ebizwa ngokuba yi "The Nut Club" kwi orenji, ijezi New. Wayedume ngokwenza umsebenzi wakhe wendlela (uqeqesho) emva kokuvala ibhari ngo-2: 00 ekuseni. Xa ebuzwa ukuba kutheni eziqeqesha ebusuku, uGalento uphendule wathi, "Cuz ndiyalwa ebusuku." UGalento wayesaziwa nangokuyeka ukugeza ukukhuthaza nomzimba womlilo kwisicwangciso sokuphazamisa umchasi wakhe. UMax Baer uphawule "Unuke ityhuna ebolileyo kunye nebhafu yotywala obudala ukubila".
UGalento, owayebanga ukuba ngu-5'9 (177 cm) ubude, wayethanda ukulinganisa malunga ne-235 lb (107 kg) kwimidlalo yakhe. Ufezekise eli nqanaba lokomelela ngokutya nantoni na, nanini na efuna. Ukutya okuqhelekileyo kukaGalento kubandakanya iinkukhu ezintandathu, icala lespaghetti, zonke zihlanjwe ngesiqingatha segaloni zewayini ebomvu, okanye ibhiya, okanye zombini zihleli ngandawonye. Xa wayeye kwinkampu yoqeqesho, waphanzisa iinzame zomqeqeshi wakhe zokuguqula indlela atya ngayo, kwaye woyikisa amaqabane akhe atyholayo ngokutya ukutya kwawo ukongeza kokunye.
Wayedume ngokuqeqesha ibhiya, kwaye kuthiwa wayetyile ama-52 izinja ezishushu ukubheja ngaphambi kokujongana no-Arthur DeKuh onzima. UGalento bekufanele ukuba udumbile phambi komlo kangangokuba umgca wesinqe weziqu zakhe kuye kwafuneka ukuba uqhekeke ukuze angene kuwo. UGalento ubanga ukuba uyonqena ifuthe lokutya zonke izinja ezishushu, kwaye akanako nokuhamba imijikelo emithathu. Nangona kunjalo, uGalento unkqonkqoze i-6'3 ″ (192 cm) iDeKuh ngenqindi elinye, igwegwe lasekhohlo, kumjikelo wesine.
NgoJuni 28, 1939, uGalento wayilwela ubuntshatsheli obunzima zehlabathi ngokuchasene UJoe Louis. Ngeli xesha, uLouis wayethandwa kakhulu (i-8 ukuya kwi-1) yokumisa uGalento. UGalento akazange achukunyiswe. Kudliwanondlebe olungaphambi kokulwa, uGalento ushwankathele umbono wakhe kumlo ngolu hlobo lulandelayo:
UGalento: "Andizange ndikhe ndicinge nge-da bum."
Uye waxela kwangaphambili ukuba uzakuthi "moida da bum", kwaye atsalele umnxeba uLouis yonke imihla ukumazisa ngokobuqu ukuba wayeyibham kwaye uGalento wayeza "moida kuye" -ngumbala omibalabala wokutshiza kwangoko, kubonakala ngathi uyaphindisela, ukuba ngumgangatho kaGalento indlela yokubonisa (JONGA IMagazini, NgoMatshi 14, 1939; IVol. 3, No. 6). ULouis kamva wathi "Undibize ngayo yonke into." Nangona wayesaziwa njengomntu oqaqambileyo owayezazisa, uTony wayenoncedo olubalulekileyo luka “Malume” UMike Jacobs ukuthengisa umlo nge-ballyhoo, yedwa. UJacobs uhlala ebuza iGalento yee-ops zeefoto kunye namabali amatsha, ngeebhotile zebhiya, ii-steins kunye neegi; ngokudubula esidlangalaleni, uTony wayesela kwibhotile yobisi, kunye noJacobs bezama ukuyibamba. Kudala ngaphambili George Foreman njenge-cheeseburger esitya umntu okhuphisana naye, uTony Galento uthimbe iingcinga zabalandeli njengomceli mngeni oqeqeshelwe ibhiya. Kuya kubonakala ngathi kufanelekile, ukuze abonise ukuba uzimisele kwaye uzilungiselele ngokufanelekileyo umlo kaLouis, uGalento wathi khange abuthathe utywala iintsuku ezimbini ngaphambi kwembambano.
Aba babini balwa Ibala laseYankee in Isixeko saseNew York. Ukufutshane, ukubala u-Galento kothusa isihlwele, kunye nomchasi wakhe, ngokugxadazela kwaye wenzakalisa uLouis ngentambo enamandla yasekhohlo kumjikelo wokuqala. Kumjikelo wesibini, uLouis waqala ukubetha uGalento ngokudibanisa ngokukhohlakeleyo, wavula ukusikwa emlonyeni kaGalento kwaye wahambisa umceli mngeni ngentambo enamandla yasekhohlo eyamphakamisa uGalento ezinyaweni zakhe. Eli yayilixesha lokuqala uGalento wayekhe wawa phantsi kubuchwephesha bakhe. Kumjikelo wesithathu, uLouis waphinda wabetha uGalento ngokudityaniswa xa uGalento wambamba ngentambo yasendle yasekhohlo; ngeli xesha uLouis wehlile. U-Louis, nangona kunjalo, waphakama ngokukhawuleza, kodwa akazange athathe amathuba okushiyeka komjikelo. Umjikelo wesine wawukhohlakele uGalento, owayengenakho ukuzikhusela kwaye wayevulelekile kuhlaselo lukaLouis. U-Louis wambetha ngokudibanisa ukubulala okwanyanzela usompempe ukuba ayeke umdlalo.
Emva komlo, uGalento wayengathuthuzeleki. UWhitey Bimstein, obambeleyo osikiweyo: “… uhleli apho ligazi ligobhoza emehlweni akhe, empumlweni nas esidleleni. Akayi kundivumela ndichukumise ukusika. Akayi kundivumela ukuba ndikhulule iiglavu zakhe Uyandityhalela kude ngalo lonke ixesha ndizama ukumenzela into, kwaye uyakhala, 'Nina bantu ngekhe nindivumele ukuba ndilwe umlo wam. Ndiyinkqonkqozile loo imagi. '”UGalento watyhola ubomi bakhe bonke, esithi abaqeqeshi bakhe bamqinisekisa ukuba atshintshe izimbo, kwaye alwe ngokucocekileyo; wazisola ukuba akazange alwe umlo "wakhe" kwaye wamdlalisa uLouis. Kunyaka nje emva kokulwa kukaLouis, uBimstein wanikela umbono owahlukileyo, esithi u-bob kunye nokuluka uTony owamkelwe kwimijikelo emibini yokuqala wayesebenza, ecaphula ukunqonqoza kukaLouis kwisakhelo sesibini njengobungqina. "Emva koko (uGalento) wacinga ukuba nguJohn L. Sullivan, weza ngqo kwi-slug, utshilo uBimstein," kwaye ngekhe uyenze loo nto noLouis. "
UJoe Louis noTony Galento bavela kunye Indlela eyayiyiyo, inkqubo ye-nostalgia yezemidlalo (i-PBS), nge-29 kaJanuwari 1976. Esi siqendu sasinomdla, ngenxa yokuphantse sisebenze kwisitayile sikaGalento esingqalileyo nesimibalabala sokuzibandakanya. ULouis ubonakalise icala elimangalisayo kuye xa, emva kokubaleka umbuzo ngugqala ongumlobi UDon Dunphy, ngokubhekisele kuyo nayiphi na imeko yokugula nxamnye UMax Schmeling (ULouis esithi yena noSchmeling bebengengabo abachasi kodwa ngokwenene "bangabahlobo abalungileyo"), emva koko wakhomba kuGalento wathi, "Kodwa laa mfo mncinci… undicaphukisile. Zonke ezo zinto zithethwayo wazithetha ngam ngelixa wayeziqeqeshela umlo wethu. Undicaphukisile, kulungile. ” ULouis wayixhasa le ngxelo ngokuveza ukuba umsindo wakhe ngexesha lokulwa wayenze isigqibo sokuba "amthwale" uGalento, okt arhuqe umlo ukuze "amohlwaye ngenxa yezinto ezimbi". Emva kokubandezeleka, uLouis watshintsha ingqondo: “[UGalento] ubethe kakhulu. Ndiye ndamkhuphela ngaphandle ngokukhawuleza. ”
Eminye imilo emibini edumileyo kaGalento yayiyeyintshatsheli yangaphambili UMax Baer, ​​kunye nomntu obambene naye ULou Nova. Umlo weNova waziwa ngokuba yenye yezona mfazwe zingcolileyo nezinegazi ezakha zaliwa. UNova wagilwa izihlandlo ezihlanu. UGalento waguqa, watyibilika, wagongxa, wabetha ezantsi kwebhanti, kwaye ubuncinci kwi-knockdowns ezimbini, uGalento "wawa" nge-230 lb (104 kg) yakhe eNova, waguqa ngamadolo kuqala. Usompempe uGeorge Blake ekugqibeleni wayimisa i-mayhem ngo-2: 44 kumjikelo we-14.
Umlo kaGalento noMax Baer uphele xa usompempe wayeka umdlalo kumjikelo wesibhozo. Ngosuku lomlo weBaer, ​​uGalento wagqiba kwelokuba ayeke kwindawo yakhe yokuphumla. Apho wayenesitya esikhulu sespaghetti, esineebhola zenyama, ehlanjwe ngesiqingatha sebhokisi yebhiya. Emva kwesidlo sakhe, uGalento waba nengxabano nomntakwabo. Impikiswano yaphela xa umntakwabo waphosa iglasi yakhe yotywala ebusweni bukaGalento, esika umlomo wakhe ngokuqatha. UGalento wanyanzelwa ukuba athungwe ngokusikwa, kwiiyure ngaphambi komlo. UBaer waphinde wavula ukusikwa kumjikelo wokuqala, enyanzela uGalento ukuba aginye igazi lentsalela yomlo. Emva komlo, uGalento watyhola ukungakwazi kwakhe "ukumngqinga entloko aze amnqande" ngenxa yelahleko. Ingxelo yakhe yayingu-80-26-5 ngama-57.
Kuncinci okwaziwayo, mhlawumbi ngesizathu esihle, kukulwa kukaGalento U-Ernie Schaaf ngo-1932 (eNewark). I-Schaaf ngelo xesha ibekwe Nombolo 3 ngo umsesane Imagazini, kwaye umlo wawuthathwa njengelitye lokunyathela kumlo wesihloko kunye neentshatsheli UJack Sharkey. Umlo ubonakala ngathi uxakekile ukusuka kowokuqala, nangona kunjalo, kunetha kwade kwakathathu ngaphambi kokuba kwenzeke. Yayihamba umgama omiselweyo we-10, kodwa yayiyinto yokubonana, izele yimfazwe enobundlongondlongo kwaye inezithonga ezininzi ezingekho mthethweni. Iitoni ezimbini uTony wabetha uSchaaf emva kwentamo ngesandla sasekunene ('iimbokodo zomvundla'). USchaaf, owachacha ngokukhawuleza, wayenamandla ekugqibeleni kwaye wasiphumelela isigqibo, kodwa akazange ayishiye itafile yakhe yokunxiba ixesha elide, ngelixa uGalento eqokelela nje isipaji sakhe wagoduka. Umsebenzi kaSchaaf wancipha, waphetha ngokubethwa nguMax Baer, ​​kwaza kwalandela ukufa kwakhe kumlo wokugqibela kumlo wakhe wokugqibela, vs. Primo Carnera. Umlo wokulwa kudala wabamba isandla esonakalisayo sikaBaer esinoxanduva lokufa kwendandatho yeSchaaf, kodwa kwinkcubeko elukhuni yee-1930s, ababhali bezemidlalo eNewark bakhawuleza ukubanga uGalento kunye nomkhosi wasebukhosini ongasentla njengoko benze umonakalo
UGalento uthathe umhlala phantsi kumdlalo wamanqindi ngo-1943, wazisebenzisa iitalente zakhe kwilizwe lomlo wobungcali. Uye wajika wabambela, kwaye wanikwa iindima kwi Umoya Kuyo yonke iYeverglades (1958) Ezona Zinto zibalulekileyo ebomini ziSimahla (1956) Abafana neeDoli (1955) kunye Kwindawo engaphambi kwamanzi (Ngo-1954). Waye wagcina uhlobo “lweqhawe labantu”, kwaye wachazwa izihlandlo ezininzi, kanye nguWC Heinz kwi-TRUE Magazine (AUGUST, 1960; VOL. 41, NO. 279).